निरन्तर “उपयोगी सम्पर्कमा” पुटिन र ट्रम्प ! | जनदिशा
निरन्तर “उपयोगी सम्पर्कमा” पुटिन र ट्रम्प !
मस्को । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उहाँका अमेरिकी समकक्षी डोनाल्ड ट्रम्पबीच निरन्तर “उपयोगी सम्पर्क” भइरहेको छ ।
यसअघि भएको दुई नेताको शिखर वार्ताका क्रममा निरन्तर सम्पर्कमा रहने सहमति भएबमोजिम उहाँहरू सम्पर्कमा रहिरहनु भएको फ्रान्सको प्रमुख प्रशासनीक केन्द्रका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
रुस र अमेरिकाका बीचमा रहेको कूटनीतिक चिसोपन कम गर्न यस्ता भेटघाट र वार्ताहरूले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
पुटिन र ट्रम्पको शिखर सम्मेलन गत हप्तामात्रै फिनल्याण्डको हेल्सिन्कीमा भएको थियो । सम्मेलनमा ट्रम्पको भूमिकालाई लिएर कतिपय उहाँकै सुभेच्छुकहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए ।
यसै वर्षको अन्त्य तिर अमेरिकाको वासिङटनमा दुई नेताको अर्को शिखर बैठक गर्ने सहमति पनि भएको जनाइएको छ । तर दुवैतर्फबाट यसका लागि कुनै तयारी भने नभएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
Previous Previous post: २५ औं दिनमा सरकारी टोली र डा. केसी पक्षबीच वार्ता, यस्तो भयो सहमति (विज्ञप्तीसहित)
Next Next post: खाद्य संस्थानको चामल महँगो भएकै कारण जनताले किन्न छाडे